BKO nlekọta nwa na-elekọta ụmụaka na-arụ ọrụ oge ụfọdụ na-arụ ọrụ na ụmụaka
Ị nwere ike itolite na anyị
Ị mụtara ịme ụmụaka ka ha na-adabere onwe ha na mmepe ha site n'inwe ihe omume na ịdu egwuregwu. Ị ga-amụta ihe nwatakịrị ga - enwe ike mgbe na otu esi esi wuo otu ndị tụkwasịrị obi na ndị nne na nna na ndị ọrụ. Ị na-akụziri ụmụaka ka ha na-enye usoro ma na-aza ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ị mụta ụzọ isi gbanwee nwa, na-asa ahụ, bee aka, ma otu esi edozi ndụ. Ị ga-akwadebe nri nwa na ụmụaka na-eso nri.
Ị na-enwe obi ụtọ isoro ụmụ gị rụọ ọrụ
Onye nlekọta ọzụzụ na-elekọta ụmụaka na-ewere na nkezi afọ abụọ.
Ọ bụ akwụkwọ agụmakwụkwọ, nke pụtara na ị nwere ike ịbanye n'oge ọ bụla n'afọ, ma ị ga-agụsị akwụkwọ naanị na 30 June.
Ị nwere akwụkwọ Ngwadogwu Wet nwetara na agụmakwụkwọ oge ụfọdụ ma ọ bụ na ị rụchaala nke ọma na 4e Secondary Nutrition & Care na agụmakwụkwọ oge nile.
Ọ bụrụ na ị gụchara akwụkwọ na agụmakwụkwọ ndị okenye ma ọ bụ mechie 6e Secondary Care, ọ ga-ekwe omume ka obere oge. Maka nke a, ị ghaghị ịbụ 18 na mmalite ma ọ bụ 18 afọ n'afọ ahụ.
Ị ga-ahụ maka nlekọta na nlekọta ụmụ gị kwa ụbọchị. Ị na-enye ha ọdịdị ma malite ịmụrụ ndị nne na nna ndụmọdụ.
Ị nwere ike ịga ụlọ ọrụ nlekọta nri, nlekọta ụmụaka ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ dịka onye na-akwụ ụgwọ. Site na akwụkwọ nlekọta ụlọọrụ ị nwekwara ike ịmalite ịzụ ụmụaka na ụmụ 18 kachasị elu.
Kedu ihe onye nlekọta na-elekọta ụmụaka kwesịrị?
Ị nwere ike ịga n'ihu na-amụ ihe ma ọ bụrụ na ị gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ sekọndrị. Usoro mmemme nke "Nwata Ụmụaka Pedagogy" na-enye gị ohere ịghọ nwa na-elekọta ụmụaka karịa ụmụaka 18. I nwekwara ike ịmụ akwụkwọ maka ndị nkụzi maka ụlọ akwụkwọ ọta akara.